Warbixin: Xamlo Dacwo oo dadka lagu barayo Allaah iyo Xuquuqda uu leeyahay Oo ka socota Wuqooyiga Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Warbixin: Xamlo Dacwo oo dadka lagu barayo Allaah iyo Xuquuqda uu leeyahay Oo ka socota Wuqooyiga Suuriya.
On Nov 10, 2018 389 0
Innahu-llaah, waa xamlo dacwo oo dhawaan qaar kamid ah ducaada Shaam ay kaga dhawaaqeen wuqooyiga wadanka Suuriya, waxaana ujeedkeedu yahay in dadka la dareensiiyo cadamada Allaah iyo xuquuqda uu ku leeyahay dadka uu abuuray.
Waxay timid kagadaal markii dalka Suuriya ay kusoo bateen zanaadiiq dharaar cad aflagaadeysa Allaah cazza wajalla, culimada iyo ducaada ayaana isla gartay in asalka dhibaatadan ay tahay jahli dillooday qaar kamid ah dadka, sidaas darteedna ay muhiim tahay in la sameeyo wacyi gelin xoogan, qofkii uu ku cadaada dembiganna dambigan la mariyo xukunka sharciga ah ee uu mudanyahay.
Culimada xamaladan ku dhawaaqday waxaa kamid ah wadaadka muhaajirka ah ee lagu magacaabo Sheykh Cabdalla Al-muxeysni, Sheikh Muslix Al-calyaani, Sheeikha muxadithka ah Cabdi-rizaaq Al-mahdi, iyo Sheeikh Siraaju-diin Zureyqaat.
Howlwadeennada xamlada ee ku faafsan wuqooyiga Suuriya ayaa la arkayay iyagoo qeybinaya manshuuraad ka hadlaya Allaah cazza wajalla, xuquuqda uu ku leeyahay insanka, iyo xukunka qof u bareera meel ka dhaca Allaah subxaanahu watacaalaa.
Boqollaal kun oo manshuuraad ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay laga qeybiyay wuqooyiga Suuriya, waxaana la dareemayay tafaacul ballaran oo ay dadku la sameeyeen xamladan oo ah mid barakeysan oo aad u wanaagsan.
Khudbadaha inta badan masaajida ku yaala wuqooyiga Suuriya ayaa jimcihii lasoo dhaafay iyo jimcahanba ka hadlaya mowduuc la xiriira Allaah cazza wajalla, xuquuqdiisa iyo sifaadkiisa, waxaana khudhabada masaajidda lagu dhiirageliyay iney si isku mid ah u qaataan khudbado ay soo diyaariyeen culimada xamlada hor boodeysa.
Halkan ka dhagayso Warbixin ku saabsan xXamlada waa Alle ee ka socota dhulka Shaam